Ergooyinkii shirka Dhuusa Mareeb oo diiday Cadaado – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ergooyinkii shirka Dhuusa Mareeb oo diiday Cadaado
Mareeg.com: Ergadii labadii bilood ee lasoo dhaafay shirka dib u heshiisiinta beelaha Gobalada Dhexe uga socda Dhuusamareeb ayaa soo saaray go’aan cusub oo ay ku diidayaan in shirka lagu dhisayo maamulka Mudugu iyo Galgaduud lagu qabto Cadaaado.
Warmurtiyeed ay soo saareen cuqaashii shirka ka qayb galaysay ayay ku sheegeen in wajiga labaad ee dhismaha maamul goboleedka uu ka furmi doono isla magaalada Dhuusamareeb, 25 March.
Waxaa la filayay in shirka maamul u samaynta goballada dhaxe lagu qaban doono magaalada Cadaado, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya mar uu socdaal ku tagay magaalaa Dhusamareeb bishii February.
Warmurtiyeedka oo ay ku saxiixnaayeen 9 oday oo mid kasta uu beel ka socday, waxaa kaloo lagu go’aansaday dhismaha guddi agaasin oo 21 xubnood ah.
Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada ergooyinka shirka ay noqon doonaan ilaa 510 xubnood. Arrintaan ayaa keeni karta muran ku saabsan dhismaha maamulka gobollada dhexe.
C/ladiif C/laahi Warsame, afhayeenka shirka oo wareysi siiyey BBC ayaa sheegay in ergooyinka ka qayb galay shirka beelaha ay u doorteen in maamulka gobollada dhaxe lagu dhiso Dhusamareeb maadaama ay magaalada leedahay tasiilaadka loo baahan yahay si uu u qabsooma shirka.
Degmada Cadaado ayaa u diyaar garowday martigelinta shirka lagu dhisayo maamulka gobollada dhexe, iyadoo halkaas lagu dhisay guddi farsamo oo deegaanka ah oo la shaqeeya guddiga fududeynta shirkaas ee dowladda Soomaaliya magacaawaday.
Halkan ka akhriso war murtiyeedka ka soo baxay Shirka dib u heshiisiinta Dhuusa Mareeb
Sida la wada ogsoon yahay waxaa muddo dhawr bilood ah ka socday magaalo madaxda Gobolka Galgaduud ee Dhuusa Mareeb shirkii dib u heshiisiinta ee Gobolada Galgaduud iyo Mudug, kaasoo furmay 25-Jannaayo- 2015, Shirkaas. waxaa ka soo qeyb galay inta badan beelaha dega gobolada Galgaduud iyo Mudug. Shirku wuxuu hadda rnarayaa heer gabo gabo ah wuxuuna gaaray guulo Ia taaban karo oo ka tarjumaya ujeeddooyinkii shirka loo qabtay, waxaana kamid ah guulaha shirku gaaray:
1.In shirku isu keenay beelo, Duubab, saaxiibbo, derisyo iyo ehel ay kala Iumiyeen, kalana qoqobeen dagaaladii sokeeye ee wadanka ragaadiyey.
II. In beelihii shirka iskugu yimid ay dbamaantood is wada cafiyeen kuna heshiiyeen wixil colaad iyo khilaaf ka dhex jirey ay ka gudbaan, kana waiaaloobaan isia markaana ku tilaabsadeen in laga hortago lana joojiyo waxkasta oo colaad keeni kara.
III. In shaqsi kasta 00 dhib tirsanaayey Ia xaqsiiyo lana qanciyo iyadoo lao marayo shareecada islaamka, qawaaniinta daika lye xeer- dhaqanka, islamarkaana Ia isu ceIiyo wixil hanti muuqata ah ee Ia kala hayo si shuruud la’aan
IV. In Ia wada dhoowro mabaadi’da: Caddaaladda, nabad kuwada noolanshaha, Derisnimo wanaagga, waiaainimada, Soomaaiinimada iya islaamnimada, wixii khilaaf ahna wada hadallagu xalliyo.
V. In si buuxda loogu midoobo sidil maamul loo dhanyahay loo sameeysan Iahaa kaasoo ka hana-qaada gobolada Galgaduud iyo Mudug.
Guddiga Marjaca iyo Guddoonka Golaha Duubabka:
Go’aanada ay gaareen guddiga marjaca iyo Guddoonka Golaha Duubabka ee ku aaddan shirka maamul u sameynta gobollada Galgaduud iyo Mudug;
Kadib markii aan xeerinney:
1. Ilaalinta guulaha ka soo baxay shirka dib u heshlislinta ee kor ku xusan.
2. Tixgelinney rabitaanka beelaha ku sugan madasha shirka dib u heshiisiinta.
3. Ka taxadarnay in dib u dhac kale oo ku yimaada yimaada labada shir ee dib u heshiisiinta iyo maamul u sameynta ee labada Gobol ee Galgaduud iyo Mudug.
4. Ixtiraamnay go’aannadii beelaha intooda badan horay u gaareen oo ahaa in madasha shir kasta oo Ia qabanayo ay ku timaado rabitaanka iyo go’aannada beelaha, sida shirka dib u heshiisiintuba uu ku yimid.
5. Tixgelinney go’aannadii Golaha duubabku horay u gaareen ee qeexayey in shirka dib u heshiisiinta laga hormariyo kan maamul u sameynta.
6. Qaddarinney ku habboonaanshaha goobta shirka dib u heshlislmntu In ay noqoto madasha shirka maamul u sameynta, marka laga fiiriyo dhinacyada;
B. Aminiga- maadaama ay joogaan ciidamo AMISOM ah iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidamada qaranka sida kuwa; millatariga, booliiska iyo nabad-sugidda.
T. Dhex dhexaadnimada madasha shirka dib u heshiisiinta marka laga eego dhinacyada:
> is dhexgalka bulshada
J. Diyaarsanaanta dhammaan adeegyadii iyo agabkii looga baahnaa shirka maamul dhisidda.
X. Joogitaanka beelihil ay aheyd in ay sameystaan rnaamulka oo intoodil badneyd ku sugan yihiin madasha shirka dib u heshiisiinta ayaa waxaa go’aansanay:-
1. In shirkii dib u heshiisiintu uu soo gabo gaboobo xilligii Ioo qorsheeyey ee ahaa 25-ka Maarso 2015.
2. In shirkii rnaamul u samneynta gobollada Galgaduud iyo Mudug uu ka furmo isla madasha shirka dib u heshiisiinta (Dhuusa mareeb) taariikhdu markey tahay 25-ka Maarso 2015.
3- In tirada ergadu ay noqoto 510 ergay
4. In tirada guddiga agaasinka shirku ay noqoto 21xubnood
Waxaan ugu baaqeeynaa Dowladda Federaalka Soomaaliya, Beesha Caalamka iyo ciidamada AMISOM, in ay tixgeliyaan qodobada ku cad war murtiyeedkeenna ee ku saleeysan rabitaanka bulshada, ayna qaataan kaalinta uga aaddan gacan siinta iyo is garab taagidda shirka maamul u sameynta gobollada.